Bam ka soo haray Dagaalkii Koobaad ee Adduunka oo laga dhex helay baradho taal warshad Hong Kong ku taal | Gaaroodi News
Bam ka soo haray Dagaalkii Koobaad ee Adduunka oo laga dhex helay baradho taal warshad Hong Kong ku taal
Bamkan oo ay dhoobo ku dheggan tahay ayaa ballaciisu waxa uu dhan yahay 8cm, waxa uuna markii la arkayay ku sugnaa xaalad aanan sugnayn sababtoo ah waxaa ka maqnaa xariggii ammaankiisa sugayay hasayeeshee wuu qarxi waayay, saraakiisha ayaa yiri.
Bamka ayaa subaxii Sabtida waxaa laga helay warshadda baradhada lagu farsameeyo ee Calbee ee ku taal bariga degmada Sai Kung.
Bambadan oo loo yaqaan bombe de terre ayaa waxaa si ammaan ah goobta ugu qarxiyay saraakiil ku xeel dheer kala furfurista bambooyinka.
“Xogta ilaa waqtigan la hayo ayaa waxa ay muujinaysaa in bamkan uu Faransiiska ka soo raacay baradhada halkaas laga soo raray,” Superintendant Wong Ho-hon ayaa u sheegay weriyayaasha.
Waxa uu intaasi ku daray in bamkaasi la qarxiyay iyadoo la isticmaalayo farsamada cadaadiska heerka sare ah ee biyaha loo adeegsado.
Waxaa la rumaysan yahay in si kama ah bamka loogu dhexdaray baradhada ka baxday dalka Faransiiska ka hor inta aanan la dhoofin.
“Bambada ayaa waxa ay u badan tahay in meesha looga tegay, oo ay askartu ganeen intii uu dagaalku socday, ama halkaas iska taallay kaddib markii la ganay,” Dave Macri, oo taariikhyahan dhinaca milateriga, ayaa waxa uu u sheegay Wargeyska the South China Morning Post.
Sanadkii la soo dhaafay, kumannaan qof ayaa waxaa si qasab ah looga daadgureeyay goob mashquul badan oo laga dukaamaysto oo ku taal Hong Kong mar boolisku uu qarxinayay bam “uu dhibaato weyn soo gaaray” oo ka soo haray Dagaalkii Koobaad ee Adduunka oo laga helay goob wax laga dhisayay.
Waxa uu ahaa bamkii labaad ee isla todobaadkaas laga helo Hong Kong.